Antonio Conte Oo Ka Hadlay Kaadhkii Casaa Ee Gary Cahill, Bandhigii Alvaro Morata Iyo Suuqa Kala Iibsiga Kooxdiisa Blues. – WWW.Gool24.net
Antonio Conte Oo Ka Hadlay Kaadhkii Casaa Ee Gary Cahill, Bandhigii Alvaro Morata Iyo Suuqa Kala Iibsiga Kooxdiisa Blues.
Tababaraha kooxda Chelsea ee Antonio Conte ayaa saxaafada ka soo hormuuqay kadib guuldaradii laama filaanka ahayd ee kooxdiisa Blues ka soo gaadhay kulankii Burnley. Antonio Conte ayaa inkasta oo ay kooxdiisa guuldaro soo gaadhay waxa uu bandigiisii amaanay saxiixa cusub ee Alvaro Morata kaas oo uu ku tilmaamay in war fiican ay kooxdiisa u ahayd.
Antonio Conte ayaa sidoo kale sheegay in maamulka kooxdiisu ay si adag uga shaqaynayaan sidii ay saxiixyo cusub u keeni lahaayeen kooxdiisa balse waxa uu xusay in uu ku sii dagaalami doono ciyaartoyda uu hadda Stamford Bridge ku haysto. Antonio Rudiger iyo Alvaro Morata ayaa saxiixyadii ay Blues xagaagan samaysay ilaa hadda saftay kulankoodii ugu horeeyay ee Premier Leaque.
Ugu horayn Antonio Conte oo ka hadlaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo kooxdiisu shaqada ay wado ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in ay waajib nagu tahay in aanu si aad u adag u shaqaynayo, in aanu shaqada ku sii wadno ciyaartoyda aanu haysano. Kooxdu sida ugu fiican ayay iskugu dayaysaa suuqa kala iibsiga, anigu kama walwalsani, waxaan diyaar u ahay in aan ku dagaalamo ciyaartoydan”.
Antonio Conte oo ka ahdlaya qaab ciyaareedkii Alvaro Morata ayaa yidhi: “Alvaro waxa uu leeyay banaan samaysi fiican oo uu naftiisa ku horumarin karo, si aad u fiican ayuu u shaqaynayaa, si aad ah ayuu u raadinayaa taam ahaanshiisa fiican iyo in uu la qabsato haanankayaga”.
Conte oo ka hadlaya in uu goolkiisii ugu horeeyay dhaliyay Morata ayaa yidhi: “Isagu si fiican ayuu u ciyaaray 30 kii daqiiqo, waxa uu dhaliyay gool kani anaga war fiican ayuu noo yahay”.
Dhinaca kale Conte ayaa ka hadlay kaadhkii casaa ee Gary Cahill wuxuuna yidhi: “Waxaanu luminay degnaantayadii kadib kaadhka cas isla markaana waxaa waajib nagu ah inaanu aritaas horumar ka samayno”.